musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Ndege kubva kuBudapest kuenda kuParis dzakatangwazve neTransavia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Budapest Airport ichazopa zvakare kubatana kune Bordeaux, Marseille, Nice, Paris Beauvais, Paris Charles de Gaulle, uye Paris Orly.
Budapest Airport yeParis pairing neTransavia.
Kutangazve 22 Gumiguru 2021, Transavia ichatanga sevhisi-vhiki nevhiki kubva kuguta guru reFrance neChishanu neSvondo.
Budapest Airport inofara kuzivisa kuti shamwari yayo yendege Transavia iri kuita kuvhura hukama pakati peguta reHungary neParis yemwaka unouya wechando. Kutangazve 22 Gumiguru 2021, mutakuri anotanga sevhisi-vhiki nevhiki kubva kuguta guru reFrance neChishanu neSvondo, yakakwana kushanya kwevhiki kune rimwe guta rakapembererwa.
France yagara iri imwe yemisika mikuru yenyika yeBudapest uye sezvo ndege yemutengo wakaderera weboka reAir France-KLM inodzokerazve mumusika mukupera kwegore rino, gedhi reHungary richazopa hukama ku Bordeaux, Marseille, Nice, Paris Beauvais, Paris Charles de Gaulle, uye Paris Orly.
Balázs Bogáts, Musoro weKuvandudza Ndege, Budapest Airport anoti: “Kubatanidzwazve kumaguta makuru eEurope kwakakosha pakuvandudza kwedu. Paris inozivikanwa nekunaka kwayo kwakawanda - hunyanzvi, fashoni, gastronomy, uye tsika - ndine chokwadi chekuti nzira iyi haingoratidze mukurumbira chete nevafambi veHungary vanoda kuongorora France, asiwo neavo vanoda kushanyira zvishamiso zvedu muBudapest. ” Bogáts anowedzera kuti: "Budapest Airport iri kufambira mberi uye chiziviso chazvino cheTransavia rimwe danho rakanangana neramangwana kwatiri."